Google မှာ ကိုယျသိခငျြတာတှကေို အလှယျတကူ ဘယျလိုရှာဖှနေိုငျမလဲ…. ဂူဂဲလျ ကို ဆရာကကြ အသုံးပွုနညျး လမျးညှနျ – Nyi Ma Lay
Google မှာ ကိုယျသိခငျြတာတှကေို အလှယျတကူ ဘယျလိုရှာဖှနေိုငျမလဲ…. ဂူဂဲလျ ကို ဆရာကကြ အသုံးပွုနညျး လမျးညှနျ
Google သုံးတတျရငျ တျောရုံကတော့ အေးဆေးပဲနျော လလေ့ာကွညျ့ကွပါဦး
ပွညျတှငျးရှိ ကြောငျးသားမြားအတှကျ Google သညျ မရှိမဖွဈ အရာတဈခုဟုသာ အဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ဆိုရမညျ ဖွဈသညျ။ သို့သျောလညျး ကြောငျးသားအမြားစုက မညျသို့အသုံးပွုရမညျကို သခြောစှာ သိရှိခွငျး မရှိသေးပေ။
မိမိရှာဖှလေိုသညျ့ အကွောငျးအရာ၊ အခကျြအလကျမြားကို တိကစြှာရှာဖှခွေငျး၊ သိမျးဆညျးမှတျတမျးတငျခွငျးတို့ကို သခြောစှာ မသိရှိခွငျးကွောငျ့ အခြိနျကုနျ၊ လူပငျပနျး၊ ငှကေုနျကွေးကြ မြားရသညျ့ အဖွဈမြိုးနှငျ့လညျး ကွုံနရေသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ အခွအေနမြေားရှိသညျ့ အတှကျ ပွညျတှငျးရှိ ကြောငျးသားတိုငျးအတှကျ Google အသုံးပွုနညျး လမျးညှနျအနနှေငျ့ အခကျြအလကျမြား ရှာဖှခွေငျး၊ သိမျးဆညျးမှတျတမျးတငျခွငျးတို့အတှကျ နညျးလမျးမြားကို စုစညျးဖျောပွပေးအပျပါသညျ။
၁။ စာအုပျတဈအုပျကို pdf file format နှငျ့ ရှာဖှလေိုပါက filetype:pdf ဟု ထညျ့သှငျးရေးသားပွီး ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ ။ ။ electronics filetype:pdf
၂။ အခြို့စကားလုံးမြားကို မိမိရှာဖှသေညျ့ အဖွရေလဒျအတှငျး ထညျ့သှငျးမဖျောပွစလေိုပါက ” – ” ( အနုတျလက်ခဏာ) ခံပွီး ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ။ restaurant -japan (Japan စားသောကျဆိုငျမရှာရနျ လုပျဆောငျခွငျး ဖွဈသညျ။)
၃။ တဈမြိုးမဟုတျတဈမြိုး တဈခုခုကို ရှာဖှမှေုရလဒျမှာ ထညျ့သှငျးဖျောပွစလေိုပါက ‘OR’ ခံပွီး ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ။ Drone OR UAV
၄။ Google တှငျ အင်ျဂလိပျဘာသာမှ အင်ျဂလိပျဘာသာ အဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ဆိုခကျြကို ရှာဖှလေိုပါက “Define” ကို အသုံးပွုနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ။ define Drone
၅။ ကိုယျရှာဖှလေိုတဲ့ အကွောငျးအရာရဲ့ စာလုံးပေါငျးကို မသိဘူးဆိုရငျ “*” ကို အသုံးပွုပွီး ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ။ electroni*s
၆။ ရှာဖှမှေုရလဒျမှာ ကိုယျရှာခငျြတာကို ရေးထားတဲ့အတိုငျး အတိအကရြှာဖှဖေို့အတှကျ ဆိုရငျတော့ ” ” ကို အသုံးပွုပွီး ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ။ “I am student”
၇။ Google မှာ Graph ရေးဆှဲလိုပါက ကိုယျရေးဆှဲမညျ့ Graph ၏ ညီမြှခွငျးကို ရိုကျထညျ့ပွီး လုပျဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈသညျ။ ဥပမာ။ y=x^2+6x+9
၈။ Website တဈခုကနေ မိမိရှာဖှလေိုတာကို Google အသုံးပွုပွီး ရှာဖှဖေို့ဆိုရငျ site:easy devboards.com Bluetooth ဟု ရိုကျထညျ့ပွီး ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
၉။ အငျတာနကျ ဆကျသှယျမှု မရှိစဉျ ယခငျရှာဖှထေားသညျ့ ရှိပွီး Cache မြားကို ပွနျလညျကွညျ့ရှုလိုပါက cache: ကို ခံပွီးရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။ ဥပမာ။ cache:easydevboards.com
ရှာဖှခွေငျးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ အခကျြအလကျမြား နောကျထပျမံပွီး Webpage မြားတှငျ ရှာဖှခွေငျးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို သိရှိထားရနျ လိုအပျပသေညျ။
• စကားလုံးတိုငျးသညျ ရှာဖှမှေုတိုငျးတှငျ အရေးပါသညျကို သတိပွုပါ။ who, the who,awho သုံးမြိုးကို ရှာဖှကွေညျ့ပါက ရှာဖှမှေုရလဒျ မတူညီသညျကို တှမွေ့ငျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
• အကွောငျးအရာမြားကို ရှာဖှရောတှငျ စကားလုံး ရှနေ့ောကျအထားအသိုသညျလညျး မှနျကနျရနျ လိုအပျပါသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ blue sky, sky blue အထားအသို နှဈခုအပျေါတှငျ ရှာဖှမှေုရလဒျ မတူညီသညျကို တှမွေ့ငျနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
• သို့သျော အခြို့သော C#, C++, Google+ စသညျဖွငျ့ Programming language အမညျမြား နောကျတှငျ တှဲလကျြပါသညျ့ # သို့မဟုတျ + စသညျတို့မှာ အရေးပါသညျကို သတိပွုရနျ လိုအပျပသေညျ။
ရံဖနျရံခါ မိမိရှာဖှသေညျ့ အခကျြအလကျမြားကို မတှဘေဲ့ လညျနခွေငျးမြိုး ကွုံလာပါက Keyword လှဲမှားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါသညျ။ Keyword ကို ပွောငျးလဲရှာဖှေ ကွညျ့နိုငျပါသညျ။
တဈစုံတဈခုကို ရှာဖှမေညျဆိုပါက ကွျောငွာမြားကိုလညျး ရလဒျမြားတှငျ ထညျ့သှငျးဖျောပွထားသညျကို တှမွေ့ငျရမညျ ဖွဈသညျ။
အဓိက မိမိရှာဖှသေညျ့ ရလဒျအဖွကေိုသာ တိုကျရိုကျဖတျရှုဖို့ လိုအပျမညျ ဖွဈပါသညျ။ Search Bar ၏ အောကျဘကျရှိ Filter တှငျ Web, image, maps, shopping စသညျဖွငျ့ မိမိလိုအပျသညျ့အရာကို ရှေးခယျြနိုငျပါသညျ။ ပုံမြားကိုသာ ရှာဖှလေိုပါက image ကို ရှေးခယျြနိုငျပါသညျ။
ရှာဖှသေညျ့ စကားလုံးကလညျး အတိအကရြှိမညျ၊ Google ဘကျကလညျး ရလဒျရှိမညျ ဆိုပါက Knowledge အနနှေငျ့ ဘေးဘကျတှငျ သီးခွားပွသထားခွငျးမြိုးလညျး ရှိပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ နရောမြားကို ရှာဖှရောတှငျ သီးခွားပွသမှုမြားကို မွငျတှဖေ့တျရှုနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
နမူနာအနနှေငျ့ Wireless Communication နှငျ့ ပတျသကျသညျ့ စာအုပျစာတနျးမြား ရှာဖှလေိုပါက အထကျပါလငျ့ချတှငျ Wireless Communication ဟု ရိုကျထညျ့ပွီး ရှာဖှပေါက စာအုပျစာတမျးမြား ကလြာမညျ ဖွဈသညျ။ ယငျးစာအုပျမြား၏ လငျ့ချတှငျ “https://books.google.com/books?isbn=_______” ဟု ဖျောပွထားမညျ ဖွဈသညျ။
ယငျးကှကျလပျနရောတှငျ ဂဏနျးမြားပါရှိမညျ ဖွဈပွီး ယငျးနံပါတျမြားသညျ အပွညျပွညျဆိုငျရာသုံး စာအုပျနံပါတျ (ISBN) ဖွဈသညျ။ အကယျ၍ မိတျဆှေ၊ သူငယျခငျြးမြားက စာအုပျတဈအုပျကို ညှနျးပါက ISBN ကို ကှကျလပျနရောမှာ ရိုကျထညျ့ပွီး အလှယျတကူ ရှာဖှနေိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
ISBN နံပါတျတှကေို စာအုပျတှရေဲ့ ရှဆေုံ့းစာ မကျြနှာမှာလညျး တှမွေ့ငျနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။ စာအုပျမြားကို ဖတျရှုပွီးပါကလညျး စာအုပျကို မိမိ Library တှငျ သိမျးဆညျးထားနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ Google Account လိုအပျမညျ ဖွဈသျောလညျး ကြောငျးသားအမြားစုက gmail အသုံးပွုတာကွောငျ့ Google Account ရှိပွီး ဖွဈပလေိမျ့မညျ။
အထကျပါ အခကျြမြားကို Google မှာ လလေ့ာရှာဖှမေညျ့ ကြောငျးသူ/သားမြားအတှကျ အထောကျအကူဖွဈရနျ အတှကျ အသုံးမြားသော အခကျြမြားကို ဖျောပွလိုကျရပါသညျ။ တကယျတော့ Google SE ကသငျတို့ထငျတာထကျ အမြားကွီး ကယျြပွနျ့ပါတယျ။ Credit
Google သုံးတတ်ရင် တော်ရုံကတော့ အေးဆေးပဲနော် လေ့လာကြည့်ကြပါဦး
မိမိရှာဖွေလိုသည့် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို တိကျစွာရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကို သေချာစွာ မသိရှိခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျ များရသည့် အဖြစ်မျိုးနှင့်လည်း ကြုံနေရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေများရှိသည့် အတွက် ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် Google အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်အနေနှင့် အချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့အတွက် နည်းလမ်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးအပ်ပါသည်။
၁။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို pdf file format နှင့် ရှာဖွေလိုပါက filetype:pdf ဟု ထည့်သွင်းရေးသားပြီး ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ။ ။ electronics filetype:pdf
၂။ အချို့စကားလုံးများကို မိမိရှာဖွေသည့် အဖြေရလဒ်အတွင်း ထည့်သွင်းမဖော်ပြစေလိုပါက ” – ” ( အနုတ်လက္ခဏာ) ခံပြီး ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ restaurant -japan (Japan စားသောက်ဆိုင်မရှာရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။)
၃။ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး တစ်ခုခုကို ရှာဖွေမှုရလဒ်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါက ‘OR’ ခံပြီး ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ Drone OR UAV
၄။ Google တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရှာဖွေလိုပါက “Define” ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ define Drone
၅။ ကိုယ်ရှာဖွေလိုတဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့ စာလုံးပေါင်းကို မသိဘူးဆိုရင် “*” ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ electroni*s
၆။ ရှာဖွေမှုရလဒ်မှာ ကိုယ်ရှာချင်တာကို ရေးထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျရှာဖွေဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ ” ” ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ “I am student”
၇။ Google မှာ Graph ရေးဆွဲလိုပါက ကိုယ်ရေးဆွဲမည့် Graph ၏ ညီမျှခြင်းကို ရိုက်ထည့်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ y=x^2+6x+9
၈။ Website တစ်ခုကနေ မိမိရှာဖွေလိုတာကို Google အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေဖို့ဆိုရင် site:easy devboards.com Bluetooth ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၉။ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မရှိစဉ် ယခင်ရှာဖွေထားသည့် ရှိပြီး Cache များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုပါက cache: ကို ခံပြီးရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ။ cache:easydevboards.com
ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ နောက်ထပ်မံပြီး Webpage များတွင် ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သိရှိထားရန် လိုအပ်ပေသည်။
• စကားလုံးတိုင်းသည် ရှာဖွေမှုတိုင်းတွင် အရေးပါသည်ကို သတိပြုပါ။ who, the who,awho သုံးမျိုးကို ရှာဖွေကြည့်ပါက ရှာဖွေမှုရလဒ် မတူညီသည်ကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
• အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေရာတွင် စကားလုံး ရှေ့နောက်အထားအသိုသည်လည်း မှန်ကန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် blue sky, sky blue အထားအသို နှစ်ခုအပေါ်တွင် ရှာဖွေမှုရလဒ် မတူညီသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
• မိမိရှာဖွေလိုသည့် စကားလုံးများကို စာလုံးအကြီးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာလုံးအသေးဖြင့်ဖြစ်စေ ရေးသားနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်ကွဲပြားမှု မရှိနိုင်ပါ။
•comma (,) ကဲ့သို့သော စာလုံးများကို မည်သို့ပင် ထည့်သွင်းစေကာမူ အရေးမကြီးလှပေ။
• သို့သော် အချို့သော C#, C++, Google+ စသည်ဖြင့် Programming language အမည်များ နောက်တွင် တွဲလျက်ပါသည့် # သို့မဟုတ် + စသည်တို့မှာ အရေးပါသည်ကို သတိပြုရန် လိုအပ်ပေသည်။
ရံဖန်ရံခါ မိမိရှာဖွေသည့် အချက်အလက်များကို မတွေ့ဘဲ လည်နေခြင်းမျိုး ကြုံလာပါက Keyword လွဲမှားခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Keyword ကို ပြောင်းလဲရှာဖွေ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေမည်ဆိုပါက ကြော်ငြာများကိုလည်း ရလဒ်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အဓိက မိမိရှာဖွေသည့် ရလဒ်အဖြေကိုသာ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုဖို့ လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Search Bar ၏ အောက်ဘက်ရှိ Filter တွင် Web, image, maps, shopping စသည်ဖြင့် မိမိလိုအပ်သည့်အရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပုံများကိုသာ ရှာဖွေလိုပါက image ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ရှာဖွေသည့် စကားလုံးကလည်း အတိအကျရှိမည်၊ Google ဘက်ကလည်း ရလဒ်ရှိမည် ဆိုပါက Knowledge အနေနှင့် ဘေးဘက်တွင် သီးခြားပြသထားခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် နေရာများကို ရှာဖွေရာတွင် သီးခြားပြသမှုများကို မြင်တွေ့ဖတ်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Advanced Searching ကို နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁။ Advanced Search page ဒီနေရာမှာ ပုံတွေကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ https://www.google.com/advanced_image_search တွင် ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ Website တွေကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ https://www.google.com/advanced_search တွင် ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဒုတိယ နည်းလမ်းတစ်ခု အနေနှင့် Operator များကို အသုံးပြုပြီးလည်း ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Operator List များကို https://support.google.com/websearch/answer/2466433 ဤလင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Operator များ အကြောင်းကို အထက်တွင် Tips and Tricks အနေနှင့် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
စာအုပ်များ ရှာဖွေခြင်း မိမိဖတ်ရှုလိုတဲ့ စာအုပ်တွေကို ရှာဖွေမည် ဆိုပါက Google Book မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေပါက အဆင်ပြေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအပြင် Google Book တွင် စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို မဟုတ်သော်လည်း အချို့အစိတ်အပိုင်းများကို နမူနာဖတ်ရှုခွင့် ပေးထားသည့်အတွက် စာအုပ်ရှာဖွေ ဒေါင်းလုပ်ရယူမည့်သူများ အတွက် အထူးပင် အဆင်ပြေစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
https://books.google.com/ တွင် စာအုပ်များကို ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နမူနာအနေနှင့် Wireless Communication နှင့် ပတ်သက်သည့် စာအုပ်စာတန်းများ ရှာဖွေလိုပါက အထက်ပါလင့်ခ်တွင် Wireless Communication ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေပါက စာအုပ်စာတမ်းများ ကျလာမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းစာအုပ်များ၏ လင့်ခ်တွင် “https://books.google.com/books?isbn=_______” ဟု ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းကွက်လပ်နေရာတွင် ဂဏန်းများပါရှိမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းနံပါတ်များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသုံး စာအုပ်နံပါတ် (ISBN) ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများက စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ညွှန်းပါက ISBN ကို ကွက်လပ်နေရာမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ISBN နံပါတ်တွေကို စာအုပ်တွေရဲ့ ရှေ့ဆုံးစာ မျက်နှာမှာလည်း တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုပြီးပါကလည်း စာအုပ်ကို မိမိ Library တွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Google Account လိုအပ်မည် ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းသားအများစုက gmail အသုံးပြုတာကြောင့် Google Account ရှိပြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
Library အတွင်း သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် မိမိဖတ်ရှုပြီး စာအုပ်များကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး ဖတ်ရှုရန် လိုအပ်သည့် စာအုပ်များကိုလည်း အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များကို Google မှာ လေ့လာရှာဖွေမည့် ကျောင်းသူ/သားများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရန် အတွက် အသုံးများသော အချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ တကယ်တော့ Google SE ကသင်တို့ထင်တာထက် အများကြီး ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Credit
Previous post အမြိုးသမီးမြား ညအိပျခြိနျ မှာ ဘရာဇီယာ ခြှတျအိပျသငျ့သလား? မိနျးခလေးတိုငျး ကို ဖတျစခေငျြပါတယျနျော။
Next post အသီးအနှံဆိုငျတှကေ ဝယျယူသူတှကေို လုံးဝမပွောပွတဲ့ အသီးရှေးနညျး လြှို့ဝှကျခကျြမြား…